ပရိတ်သတ်တွေ သိချင်နေကြတဲ့ ဘာလို့ဖီလစ်ပိုင်မှာထက် မြန်မာပြည်မှာ အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြလာတဲ့ ဖီလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon Loresca – CharTake
ပရိတ်သတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့ ဘာလို့ ဖီလစ်ပိုင်မှာထက် မြန်မာပြည်မှာ အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတာလဲဆိုတာကို ရှင်းပြလာတဲ့ ဖီလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon Loresca
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ … ပရိတ်သတ်တွေ သိချင်နေကြတဲ့ ဘာလို့ ဖီလစ်ပိုင်မှာထက် မြန်မာပြည်မှာ အလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖီလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon Loresca က အခုလိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ် ။
” မြန်မာက ကျတော့် နှလုံးသား မြန်မာကလူတွေ အများစုကမေးတယ် … ကျတော်ကဘာလို့ ကျတော်နိုင်ငံ ဖိလစ်ပိုင်ထက်ပိုပီး ဘာလို့မြန်မာမှာ ဒီလိုတွေ လာလုပ်ပေးနေတာလည်း မေးကြတယ် ။
ဘာလို့မြန်မာမဖြစ်ရမှာတုန်း? ကျတော်နိုင်ငံမှာကျတော် ဒီလိုတွေဒီနည်း၎င်း ကျတော်လုပ်ပေးခဲ့တယ် … အများစုက ကျတော့်ကိုအပြစ်တင်တယ် အပြစ်ပြောတယ် …ကျတော်လုပ်သမျှ အရာအားလုံးကိုပေါ့ …
ကျဝောာ့်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ သတင်းတွေကို Onlineတွေ ပေါ်မှာ ဖြန့်တယ် ကျတော့် ဂုဏ်သက္ခာကျအောင်လုပ်ကြတယ် … ကျတော့်ကို မလေးစားကြဘူး။ ပီးတော့ပြောကြသေးပါတယ် ကျတော်က ဘယ်တော့မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ … ကျတော့်အပေါ်ကို အမြဲမကောင်း မြင်တယ် ။
မြန်မာမှာကျတော့ ကျတော့်ရဲ့ နှလုံးသားကျတော့်ရဲ့ အိမ်အစစ်ကိုကျတော်ရှာတွေ့တယ် ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက မေတ္တာစိတ် အပြည့်နဲ့ အချင်းချင်းလေးစားမှု အပြည့်အ၀ရှိတယ် ။ မိမိ လုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှု ကုသိုလ်တစ်ခု ကိုမျှဝေလိုက်တယ်ဆိုရင် သူတို့ပါလိုက်ပီး ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ သာဓုခေါ်ကြတယ် ။
မြန်မာ လူမျိုးတွေက အမုန်းစကားတွေအစား ငြိမ်းချမ်းတဲ့စကား အချစ်ပွားစေတဲ့ စကားတွေဘဲ ပြောကြတယ် ။ အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီကြတယ် ။ လူသားအချင်းချင်း စာနာကြတယ် ။ အဲ့တာကြောင့်ဘဲ မြန်မာကိုပိုပီး ချစ်တာဖြစ်တယ် ။ ကျတော့်ရဲ့အိမ်လို့ဘဲ သဘောထားတယ် ။ ပီးတော့ကျတော့်ဘ၀တစ်လျောက်လုံးမြန်မာကိုချစ်သွားမယ် ကျတော့်နှလုံးသား အတွက်တော့ မြန်မာက ထာဝရအိမ်ဘဲ … ” ဆိုပြီ သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကနေ မျှဝေပေးထားပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ သိချင်နေကြတဲ့ အကြောင်းအရာကို သိခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံးပဲ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော် ။ မြန်မာပြည်ကို အရမ်းချစ်တဲ့ Sinon တစ်ယောက် မြန်မာပြည်မှာ ဒီထက်မက ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော် ။ Source ; Sinon Loresca
Unicode … ပရိတျသတျတှသေိခငျြနကွေတဲ့ ဘာလို့ ဖီလဈပိုငျမာထကျ မွနျမာပွညျမာ အလအတနျးတှေ လုပျနတောလဲဆိုတာကို ရငျးပွလာတဲ့ Sinon Loresca
မင်ျဂလာပါ ပရိတျသတျကွီးရေ … ပရိတျသတျတှေ သိခငျြနကွေတဲ့ ဘာလို့ ဖီလဈပိုငျမာထကျ မွနျမာပွညျမာ အလအတနျးတှေ လုပျနတောလဲဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဖီလဈပိုငျမျောဒယျ Sinon Loresca က အခုလိုရငျးပွလိုကျပါတယျ ။
” မွနျမာက ကတြေျာ့ နလုံးသား မွနျမာကလူတှေ အမြားစုကမေးတယျ … ကတြျောကဘာလို့ ကတြျောနိုငျငံ ဖိလဈပိုငျထကျပိုပီး ဘာလို့မွနျမာမာ ဒီလိုတှေ လာလုပျပေးနတောလညျး မေးကွတယျ ။
ဘာလို့မွနျမာမဖွဈရမာတုနျး? ကတြျောနိုငျငံမာကတြျော ဒီလိုတှဒေီနညျး၎င်းငျး ကတြျောလုပျပေးခဲ့တယျ … အမြားစုက ကတြေျာ့ကိုအပွဈတငျတယျ အပွဈပွောတယျ …ကတြျောလုပျသမြ အရာအားလုံးကိုပေါ့ …
ကဝြောျာ့ရဲ့မဟုတျတဲ့ မကောငျးတဲ့ သတငျးတှကေို Onlineတှေ ပျေါမာ ဖွနျ့တယျ ကတြေျာ့ ဂုဏျသက်ခာကအြောငျလုပျကွတယျ … ကတြေျာ့ကို မလေးစားကွဘူး။ ပီးတော့ပွောကွသေးပါတယျ ကတြျောက ဘယျတော့မ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့သူတဈယောကျဖွဈလာမမဟုတျဘူးတဲ့ … ကတြေျာ့အပျေါကို အမွဲမကောငျး မွငျတယျ ။
မွနျမာမာကတြော့ ကတြေျာ့ရဲ့ နလုံးသားကတြေျာ့ရဲ့ အိမျအစဈကိုကတြျောရာတှတေ့ယျ ။ မွနျမာလူမြိုးတှကေ မတ်ေတာစိတျ အပွညျ့နဲ့ အခငျြးခငျြးလေးစားမ အပွညျ့အဝရတယျ ။ မိမိ လုပျထားတဲ့ကောငျးမ ကုသိုလျတဈခု ကိုမဝြလေိုကျတယျဆိုရငျ သူတို့ပါလိုကျပီး ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ သာဓုချေါကွတယျ ။
မွနျမာ လူမြိုးတှကေ အမုနျးစကားတှအေစား ငွိမျးခမျြးတဲ့စကား အခဈြပှားစတေဲ့ စကားတှဘေဲ ပွောကွတယျ ။ အခငျြးခငျြးရိုငျးပငျးကူညီကွတယျ ။ လူသားအခငျြးခငျြး စာနာကွတယျ ။ အဲ့တာကွောငျ့ဘဲ မွနျမာကိုပိုပီး ခဈြတာဖွဈတယျ ။ ကတြေျာ့ရဲ့အိမျလို့ဘဲ သဘောထားတယျ ။ ပီးတော့ကတြေျာ့ဘဝတဈလြောကျလုံးမွနျမာကိုခဈြသှားမယျ ကတြေျာ့နလုံးသား အတှကျတော့ မွနျမာက ထာဝရအိမျဘဲ … ” ဆိုပွီ သူရဲ့ လူမကှနျယကျကနေ မဝြပေေးထားပါတယျ။
ပရိတျသတျကွီးတို့ သိခငျြနကွေတဲ့ အကွောငျးအရာကို သိခှငျ့ရခဲ့တဲ့အတှကျ အားလုံးပဲ ကနြေပျကွလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျနျော ။ မွနျမာပွညျကို အရမျးခဈြတဲ့ Sinon တဈယောကျ မွနျမာပွညျမာ ဒီထကျမက ကူညီလဒါနျးမတှေ ပွုလုပျနိုငျအောငျ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော ။ Source ; Sinon Loresca